आमा-छोराको कथामा किन छोरालाई मात्र स्थान ? « Ramailo छ
आमा-छोराको कथामा किन छोरालाई मात्र स्थान ?
७० प्रतिशत छायाँकन समाप्त भैसकेको फिल्म ‘मेरी मामु’को फस्टलूक पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । भदौ १५ रिलिज टार्गेट गरिएको फिल्मको फस्टलूकमा बालकलाकार आयुब सेनलाई मात्र स्थान दिइएको छ ।
यो फिल्ममा डेब्यु गर्ल कुशुम गुरुङ आयुबको आमाको भूमिकामा प्रस्तुत हुँदैछिन । आमा-छोराको सम्वन्धको कथामा बनिरहेको फिल्मको फस्टलूकमा छोरामा स्थान दिइनुले कतै निर्माता सन्तोष सेन अर्थात आयुबका पिताले आफ्नो छोरालाई मात्र बुस्ट गर्न खोजेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नत्र भने आमा-छोराको कथामा आमालाई स्थान नदिइनुलाई कसरि बुझ्ने ?
सन्तोषले आशुसेन फिल्मस्को व्यानरबाट यो चौथों फिल्म निर्माण गरेका हुन् । यम थापाको लेखन निर्देशन रहेको फिल्ममा ‘प्रेमगीत २’ फ्रेम्ड अभिनेत्री अश्लेशा ठकुरीसँगै शारुक ताम्राकार र दुर्गा मल्लको प्रमुख भूमिका छ । फिल्मको छायाँकन, स्वरांकन र सम्पादनको काम साथ-साथै भैरहेको छ ।